Ogaden News Agency (ONA) – Hamid Karzai oo Maraykanka Ku Eedeeyay Samaynta Daacishta Afqanistan.
Hamid Karzai oo Maraykanka Ku Eedeeyay Samaynta Daacishta Afqanistan.
Posted by ONA Admin	/ November 12, 2017
Hamid Karzai, Madaxweynihii hore ee dalkaasi Afghanistan ayaa waraysi uu siiyay Talafeeshinka Aljazeera ku sheegay in dowlada Maraykanka ay wax ka ogeyd kooxda Daacish ee kusii fidaysa dalkaas.
Mr. Karzai oo lagu wareystay barnaamijka Upfront ee jimcihii laga baahiyey aljazeera, ayaa sheegay in Maraykanka uu si fiican ulla socday markii maleeshiyaadka Daacish ay ku fidayeen dalkiisa, balse Maraykanka uusan wax talaabo ah ka qaadin.
Mr. Karzai ayaa sheegay in Maraykanka marmarsiinyo ka dhigtay kooxda Daacish ee Afghanistan bishii April ee sanadkan oo ahayd xiligii dowlada Trump ay bombada weyn ee loo yaqaan “mother of all bombs” (MOAB) ku dhufteen degaanka Achin oo ka tirsan Gobalka Nangarhar oo xaduud laleh dalka Pakistaan. Bambaanadaasi oo dhulka la sintay dhul ah 1.6km oo isku wareeg ah.
Hamid Karzai oo kamid ah xulafadii Maraykanka ee maamulka dalkaasi loo dhiibay kadib markii isbaheysiga NATO burburiyey xukuumadii Talibanka, ayaa sheegay in sirdoonka iyo militariga Maraykanka uu wax badan kala socday aasaaska Daacishta wadanka Afghanistan kusii fidayey 2dii sano ee lasoo dhaafay.